Hetsika Filazana Tantara Mikendry Hiarovana ny Fahasamihafana Ara-piteny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2017 4:38 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, русский, Ελληνικά, Italiano, Português, Français, Español, Esperanto , English, 繁體中文, 简体中文, عربي, English
Filazana tantara, avy amin'ilay mpisera Flickr, Daniele Rossi, zon'ny mpamorona, CC BY-NC-ND 2.0.
Mety misy fomba hifandraisana amin'ny olona, eto sy amin'izao fotoana izao ve, na dia eo aza ny sakana ara-pitenenana? Ho an'i Steven Bird sy Robyn Perry, mpanorina ny Tetikasa Fitantarana amin'ny Teny Harena (Treasure Language Storytelling) (TLS), valinteny azo atao ny fitantarana amin'ny fiteny voalohany.
Vao haingana ny Global Voices no nitatitra tetikasa iray hafa notarihan'i Steven Bird, ny bilaogy Untranslatable. Eto anefa, ny ifantohan'ny TLS dia tsy momba ny voasoratra fa momba ny teny iresahana, ary ezaka hiarovana sy hankalazana ny fahasamihafan'ny fiteny ao amin'ny tanàna midadasika. Eny tokoa, ao amin'ny faritra andrenivohitra toa an'i Melbourne sy Darwin, Aostralia, na Oakland any Etazonia, izay nanatontosan'ny TLS hetsika nanomboka tamin'ny taona 2015, matetika tandindonin-doza tsy ho tafafindra amin'ny ankizy teraka tao ny teny madinika na tsy dia tena madinika loatra. Hoy ny mpamorona ny tetikasa:
Ny fahafatesana faobe ho an'ny fiteny manerana izao tontolo izao dia azo sorohina raha mamorona tanàna manaiky ny fahasamihafana- toerana azo antoka ahitana mponina tsy mila manadino ny momba azy ireo mba ho anisan'izany isika.
Raha toa ny “fihainoana ka mifandray matetika amin'ny fahatakarana”, mikendry ny “hihaino mba hankasitraka, hahatsapa, hifandray” ireo hetsika ireo. Amin'izany endrika izany, milaza ny tantaran'izy ireo amin'ny teniny manokana aloha ireo mpilaza tantara ary avy eo mandika na manazava azy ireo amin'ny teny Anglisy. Na dia tsy mpilaza tantara matihanina aza ireo mpandray anjara, mandrisika ny mpihaino hanao zavatra ny fahavononan'izy ireo sy ny asan'izy ireo ary miteraka hehy sy fihetseham-po, tahaka ny tsy sakana intsony ny teny.
Ohatra, ny lahatsary eto ambany dia tantara nentim-paharazana avy any Burkina Faso notantaraina tamin'ny teny Dafing. Nandritra ny fotoam-panontaniana, afaka nanazava ny fomba amam-panao amin'ny fitantarana ao amin'ny fireneny ilay mpilaza tantara, Rassidatou Konaté.
Tamin'ny hetsika hafa, milaza ny tantaran'ny bitrodia sy ny babouin (karazana gidro) amin'ny teny Shona ao Zimbaboe i John Nyamusara:
Rehefa avy nanazava ny hevitry ny tantarany i i John Nyamusara, dia nanontaniana hoe “Ahoana izany hoe miresaka amin'ny mpihaino izay tsy mahatakatra ny fiteninao izany?” Tamin'ny tsiky lehibe iray, nizara ny fahatsapany ny fiombonana izy:
“Nihaino izy ireo! Nihaino tsara izy ireo … Niaraka tamiko izy ireo!”
Afaka mijery tantara notantaraina tamin'ny teny Tagalog, Chochenyo, Ewe sy ny fiteny maro hafa ao amin'ny fantsona Vimeo sy YouTube ianao amin'ny hetsika fototra Aikuma .
Raha notontosaina tao amin'ny tanàna telo ny hetsika “Fitantarana Amin'ny Teny Harena” hatramin'izao, manantena fa handroso ireo mpikarakara, ary izay rehetra nahazo aingam-panahy tamin'ny tetikasa dia afaka mifandray amin'ny TLS mba hikarakarana fampisehoana fitantarana azy ireo manokana.